Umndeni ukhala ngongeniswe esibhedlela wagulela ukufa | News24
Umndeni ukhala ngongeniswe esibhedlela wagulela ukufa
Pretoria – Umndeni waseSunnyside sekudingeka ukuba ulale esibhedlela eceleni kamama ogula kabi.
Lokhu kungemuva kokuba bebecabanga ukuthi izikhulu zesibhedlela zizongenelela njengokwesithembiso ngesimo sempilo kaTryphina Mkwe ongeniswe esibhedlela maqede wagula kakhulu kunakuqala, nangezinsolo zokuthi uyahlukunyezwa.
Kodwa kunalokho umndeni uthi isibhedlela sesibatshele ukuthi abafike namaphoyisa, nabameli noma babikele uNgqongqoshe uma benganelisekile.
Funda nalolu daba: Lihlehlisiwe elowathumba ingane esibhedlela
Umndeni uthi ngeSonto ekuseni waziswe yisibhedlela ukuthi akukho ekusangenziwa ngalo mama ongeniswe esibhedlela kusolwa ukuthi une-jaundice.
Indodakazi yalo mama, u-Enika Pitso, ithi batshelwe ukuthi umama wabo usenesifo somdlavuza kanti futhi nezinso zakhe azisasebeni, ngalokho akukho abangakwenza.
Kuthiwa lo mama ungene esibhedlela ezihambela ngezakhe izinyawo kodwa manje akasakwazi kwenza lutho.
Okhulumela uMnyango uSteve Mabona uthi bakhathazekile ngezinsolo abazitholayo, kubika iPretoria News.